हाल नेपालमा लगाइको खोप के म्याद सकिएको हो ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिक्रिया के छ ? « Niatra TV
हाल नेपालमा लगाइको खोप के म्याद सकिएको हो ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिक्रिया के छ ?
काठमाण्डौ,भदौ १२ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले म्याद सकिएका भाइरसविरुद्धको खोप नलगाएको स्पष्ट पारेको छ ।